WAALLI: Ciyaartoyga Liverpool Oo Looga Baaqayo In Dhaawac Maskaxeed Oo Sababi Kara Waalli Kasoo Gaadho Wararka Sheegaya In Horyaalka La Kansalayo Iyo Tallaabada Lagu Badbaadinayo Ee Reds Qaadday - Gool24.Net
WAALLI: Ciyaartoyga Liverpool Oo Looga Baaqayo In Dhaawac Maskaxeed Oo Sababi Kara Waalli Kasoo Gaadho Wararka Sheegaya In Horyaalka La Kansalayo Iyo Tallaabada Lagu Badbaadinayo Ee Reds Qaadday
March 24, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ugu yeedhay ciyaartoygeeda dhakhtar ku takhasusay cilmi-nafsiga oo ka caawiya sidii aanu ugu dhici lahayn isku-buuq maskaxeed iyo waalli ay ka qaataan wararka niyad-jabka ku abuuraya ee kasoo baxaya maamulka Premier League, FA Cup iyo khubrada ciyaaraha ee sheegaya in ay suurtogal tahay in horyaalka la kansalo, isla markaana Liverpool laga hor joogsado horyaalka Premier League ee ay soddonka sannadood markii ugu horreysay ku guuleysanayso.
Hakadka uu sababay canuunka Coronavirus ee ku yimid horyaalka Premier League, waxa uu walaac iyo qalbi jab ku keenay ciyaartoyda iyo taageereyaasha Liverpool, waxaanay hadh iyo habeen ka fikirayaan waxa dhici karaya iyo waxa la yeelayo haddiiba horyaalka dib loo bilaabi kari waayo oo uu halkan ku istaago.
Sida uu qorshuhu yahay, Horyaalka Premier League waxa uu bilaabmi doonaa April 30, hase yeeshee waxa lasoo jeedinayaa in dib loo dhigo illaa bilowga bisha June maadaama caabuqa Coronavirus uu wali yahay mid aad u faafaya oo heerka dhimashadiisuna ka sarrayso intii marka hore la saadaalinayey.
Reds oo 25 dhibcood ku hoggaaminaysa horyaalka oo kaliya u baahan lix dhibcood si ay u dabbaal-degto, waxa uu isku-buuq ku faran yahay ciyaartoyda qaarkood, taas oo keentay in loogu yeedho dhakhtar cilmi-nafsiga iyo xanuunnada maskaxda ku takhasusay oo talooyin niyad-dhis ah oo ka yareeya buuqa maskaxda siiya ciyaartoyda.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, ciyaartoyda Liverpool waxa talooyin joogto ah siiya khabiirka cilmi-nafsiga ee Lee Richardson, waxaanu kala dardaarmay samaynta dhawr arrimood iyo kuwo kale oo uu ku dhiirigeliyey, si ay maskaxdooda uu uga yaraado culayska saaran oo ay uga badbaadaan qulub ku dhaca.
Lee Richardson waxa uu ciyaartoyga u sheegay dhawr siyaabood oo loo neefsado marka isku-buuq maskaxeed ay dareemaan iyo sida ay tahay inay baraha bulshada u isticmaalaan.
Cashar uu Lee Richardson u jeediyey ciyaartoyda, ayaa waxa loogu magac daray ‘Mental Health & Well-being’ oo Afsoomaali ku noqonaysa ‘Caafimaadka Maskaxda iyo Fayoobaanta’, kaas oo cinwaan hoosaadka looga dhigay waxyaabaha ay tahay inay ogolaadaan ee ay ku qasban yihiin iyo sida maskax ahaan ay ula tacaalayaan.
“Wax kasta oo dhaca oo ah go’aan ka yimaadda Premier League ama hiyada xanuunka fayrasku ay u socoto, waxay ka baxsan yihiin maamulkeenna. Dhamaanteen waxaynu maamuli karaynaa waa dhaqankeenna iyo jawaabta-celinta aynu ka samaynayno caqabadaha iyo ilaalinta badqabka kuwa nugul, si loo yareeyo heerka caabuqa” Ayuu dhakhtarkani casharkiisa ugu sheegay ciyaartoyda Liverpool.
“Sida uu tababaruhu sheegay, Kubadda cagtu maaha shayga ugu muhiimsan. Caafimaadka iyo badqabkeena ayaa aad uga muhiimsan.” Ayuu sidoo kale dhakhtarku ku yidhi ciyaartoyda.